Matanho gumi kune Anopenya Yemagariro Vatengi Service Martech Zone
Matanho gumi kune Anopenya Yemagariro Vatengi Sevhisi
Chipiri, August 6, 2013 Chipiri, August 6, 2013 Douglas Karr
Isu takanyora nezve iyo kukura kwehukama hwevatengi sevhisi munguva yakapfuura, uye isu tinoramba tichisundira vatengi vedu munzira iyoyo. Zvemagariro vatengi sevhisi tarisiro yevatengi vako uye mukana unoshamisa wezvauri kushambadzira. Chii chiri nani pane kubatsira mutengi munzvimbo inoonekwa neruzhinji apo munhu wese anogona kuona kuti uri kambani yakakura sei?
Huwandu hwevanhu vari kuita hurukuro dzepamhepo nemhando dziri kuwedzera gore-ne-gore. Vanoda kusvika makumi mashanu kubva muzana (50%) yevashandisi vese vezvemagariro vakashandisa rubatsiro rwemagariro, kusanganisira chinenge chikamu chimwe muzvitatu chevaya vanopfuura makore 65. Nehurombo, mhedzisiro kusvika parizvino inosiya zvakawanda zvinodiwa Chete 36% yevatengi iyo inoita kubvunza kwevatengi kubvunza kuburikidza nesocial media meseji kuti yavo gadziriso igadziriswe nekukurumidza uye zvinobudirira
Iyi infographic kubva Sentiment Metrics, inonyatsotsanangurwa nzira-mepu yekambani chero ipi iri kutsvaga kuita kana kugadzirisa yavo yemagariro vatengi.
Tags: Mabatiro evatengikasitoma rutsigirokushamwaridzana nevatengisocial supporttsigira